राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता देखेपछि कोरोना भाइरस गायब !
भाद्र २१, २०७८ १५:२७ मा प्रकाशित
नेपालमा अहिले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम उत्तिकै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका पछिल्लो दिनको विवरण अनुसार संक्रमणदर करिब १४ प्रतिशत छ । संक्रमणदर १० प्रतिशत भन्दा माथि हुनुलाई जटिल अवस्था मानिएको छ । यसै कारणले गर्दा सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा अझै निषेधाज्ञा लागू गरिरहेका छन् । खुकुलो रुपमा लागूगरिएको निषेधाज्ञाई सरकारले स्मार्ट लकडाउन भनेको छ ।
संक्रमणको जोखिम भएका पेशा, व्यवसाय तथा गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ । संक्रमण फैलिन नदिनका लागि अनिवार्य मास्क लगाउनलाई प्रेरित गर्न प्रहरीले तपाईको मास्क खोइ ? अभियान जारी राखेको छ । देशका विभिन्न सहरका ड्यूटीमा खटिएका प्रहरी, ट्राकिफ प्रहरीले शरीरमा तपाईको मास्क खोई ? लेखिएको ब्यानर लगाएर ड्यूटी गरिरहेको देखिन्छ ।
महामारीलाई थप फैलन नदिन अपनाइएका यी सबै नियम तथा प्रयासलाई नेपालका राजनीतिक दलले धज्जी उडाइरहेका छन् । उनीहरुका गतिविधि हेर्दा लाग्छ कोरोना भनेको राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताबाहेकका व्यक्तीलाई मात्रै सर्ने भाइरस हो । त्यसबाट बच्न त्यसबाहेककाले मात्रै सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
माथिको तस्बिरमा देखिएको दृश्य पर्सा जिल्लाको वीरगन्जको हो । त्यहाँ देखिएको जमात सोमबार वीरगन्जमा आयोजित एमाले पर्साको भेलामा सहभागीहरु हुन् ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुभएको उक्त तस्बिरमा एकाधले मात्रै मास्क लगाएको देखिन्छ । प्रमुख अतिथीका रुपमा मञ्चमा बस्नुभएका प्रवक्ता ज्ञवालीले पनि मास्क लगाउनु भएको छैन । उक्त मञ्चमा बसेका एक जनाबाहेक कसैले मास्क लगाएको देखिँदैन ।
हलमा बस्नेहरुको त कुरै नगरौँ । कोचाकोच गरेर बसिरहेको देखिन्छ । एकाधबाहेक कसैको मुखमा मास्क छैन । भर्खरै एमाले विभाजन भएको छ । विभाजन हुँदा पनि आफूहरुको पक्षमा यति धेरै जना छन् भनेर भीड देखाउन खोजेको सजिलै बुझिन्छ ।
पर्सामा चाँही त्यो गर्न पाइने पो होकी ? भन्ने पर्न सक्ला त्यो पनि होइन ।
यही भदौ १७ गते पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले जारी गर्नुभएको आदेशमा कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न अनिवार्य गरिएको छ ।
उसो त त्यो आदेशले अनावश्यक रुपमा भीडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर जस्ता कार्य नगर्ने/नगराउने भनेर स्पष्टै भनेको छ ।
जारी सूचनामा उल्लेखित कुराहरु एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना भए/नभएको अनुगमन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र सुरक्षा निकायहरुबाट नियमित रुपमा हुने जानकारी दिइएको छ । ‘अनुगमन गर्दा यस विपरीत भए, गरेको पाइएमा प्रतिलित कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ’ पनि भनिएको छ ।
अब हेरौँ त यहाँ देखिएको फोटोमा आदेशबमोजिम पालना भएको छ ?
अब उनीहरुलाई आदेशबमोजिम पाइएन भनेर कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ त ?
एउटा मात्रै नभएर अहिले सबै दलले यस्ता खाले भेला जमघट गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण, व्यवसायी लगायतलाई कठाइ गरिरहेको प्रशासन राजनीतिक दलका यस्ता गतिविधिमा मौन देखिन्छ ।
यति ठूलो क्षति पुर्‍याएको महामारीलाई यसरी वेवास्ता गर्न मिल्छ ? प्रशासनले जारी निमय चाँही कमजोरहरुका लागि मात्रै लागू हुने हो।
सडकमा एक्लै लुखुर–लुखर हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई तपाईको मास्क खोइ ? भनेर सडकमा प्रदर्शन गर्दैमा कोरोना भाग्ने हो?